Senator sheegay ilaaladi marxuum boqore in maalmo kahor laga kaxaystay – Radio Daljir
Senator sheegay ilaaladi marxuum boqore in maalmo kahor laga kaxaystay
Febraayo 24, 2019 6:57 b 0
Shalay gelinkii dambe ayay aheyd markii degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir lagu dilay Xildhibaan ka tirsanaa Golaha Shacabka oo lagu Magacaabi jiray Alle ha u naxariistee Cismaan Cilmi Boqore.
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa sheegay in maalma ka hor ay Xildhibaanka wada kulmeen,isla markaana uu u sheegay in taliska Ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ka kaxeysteen ilaaladiisa.
Sidoo kale Senator-ka ayaa ka tacsiyadeeyey dilka Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore,isaga oo sheegay in markii ay kulmeen todobaad ka hor uu ka walaacsanaa xaaladiisa Amniga,isla markaana ay ka wada tirsanaayeen Xisbiga UPD oo ah Xisbi mucaarad ku ah dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Si kastaba Maamulka degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir ayaa shalay markii uu dilka dhacay waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay dilka oo watay gaari nooca raaxada ah.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda dilka Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore,iyaga oo sheegay in raggi dilkaasi geystay ay si nabad ah u soo baxsadeen.
Duqayn ka dhacday gobalka shabeelaha hoose